कोरोना विज्ञ बन्ने होडबाजी ? « Anumodan National Daily
कोरोना विज्ञ बन्ने होडबाजी ?
प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १०:३९
केही समययता विश्वभरी नोवल कोरोना भाइरसको आतंक झैं फैलिएको छ । चीनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका केही मुलुक फैलिएको तथ्यांकले देखाएको छ, तर यसको सन्त्रास विश्वभरी फैलिएको छ । सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा यसकै चर्चा छ । कतिपय चर्चा वा समाचार तथ्यमा आधारित छन्, भने कतिपय भ्रामक र हल्ला फैलाइएका छन् । कोरोना भाइरसको यतिबिघ्न होहल्ला फैलाइएको छ कि तथ्य के हो भन्ने मै अलमलमा परेको अवस्था छ । त्यसैमा यतिवेला प्रत्येक व्यक्ति कोराना विज्ञ बन्ने होडबाजीमा लागेको प्रतित हुन्छ । तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभरी एक लाख सात हजार मानिस प्रभावित भएका छन् । भने यसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म तीन हजार छ सय साठी जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै, अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमितमध्ये साठी हजारबढी निको भएका छन् भने अहिले पनि त्रिचालीस हजार बढि मानिसमा कोरोना भाइरस सक्रिय रहेको छ । कोराना भाइरस संक्रमणको यो पछिल्लो तथ्यांक रहेको छ, तर यसबारे फैलिएको अनेकथरी होहल्लाले आम जनमानसमा भयावह सन्त्रास छाएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणबारे स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकारका विभिन्न निर्णयले उल्टै जनमानसलाई भ्रमित गरिरहेको अर्को उदेगलाग्दो अवस्था छ । संघीय सरकारले आगामी चैत्र पहिलो सातासम्म सबै विद्यालयमा आन्तरिक तथा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकोमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्नु र सो निर्णयको चारैतिर व्यापक आलोचना भएपछि अर्कोदिन बन्द निर्णय फिर्ता लिएको प्रसंगले कोरोना भाइरसबारे विभिन्न तहका सरकारहरूबीच कुनै समन्वय नै नरहेको र खेलाची झैं गरिरहेको प्रतित हुन्छ । त्यसैमा यतिवेला कोराना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन सबै विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी झैं सन्देश प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ । यी सबै कारणले कोरोना भाइरसबारे तथ्यपूर्ण सन्देश प्रवाहको ठाउ“मा झन् भ्रामक सन्देश फैलाउने काम भइरहेको र यसले आम जनमानसलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको यथार्थ अवस्थाबारे सन्देश तथा तथ्यांक प्रवाह गर्न तत्काल संघीय सरकारले एउटै आधिकारिक संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबारे आमजनतामा व्याप्त सन्त्रासप्रति गम्भीर भएर सबै सरकारहरूले रोकथामका लागि प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ, तर यसका लागि पनि सबै तह वा सरकारबाट एउटै खालको सन्देश प्रवाह हुनसकोस् भन्नेमा सचेत हुनै पर्दछ । आम जनतामा सही सूचना तथा सन्देश प्रवाह नै यसको रोकथामको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । त्यस्तै, कोरोना भाइरसको त्रास देखाएर अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै मुल्यबृद्धिको अवस्था पनि देखिएको छ । त्यसैले सबै तहका सरकारका साथै स्थानीय प्रशासन र अन्य सम्बद्ध निकायले कोरोनाका नाममा कुनै पनि किसिमको गलत कार्य बढ्न नदिन ठोस पाइला चाल्न ढिलाई गर्नु हुदैन । अनावश्यक भ्रम र होहल्ला फैलाएर स्थितिलाई अझ भ्रामक बनाउने खालका कुनै पनि कामको कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि गम्भीर हुनु पर्दछ ।